दक्षिण कोरियामा मासिक १४ लाख तलब ! - Everest Dainik - News from Nepal
दक्षिण कोरियामा मासिक १४ लाख तलब !
काठमाडौं, असार ३२ । दक्षिण कोरियामा कामदारको तलब १०.९५ प्रतिशत बढ्ने भएको छ । तलब वृद्धिसँगै कामदारको तलब प्रतिघण्टा ८ हजार ३ सय ५० कोरियन वोन निर्धारण भएको छ ।
जसअनुसार दैनिक ८ घण्टा काम गरेपछि महिनाको न्यूनतम तलब १७ लाख ४५ हजार १ सय ५० अर्थात् मासिक नेपाली १ लाख ६८ हजारभन्दा बढी रूपैयाँ पाउने छन् ।
गत वर्ष प्रतिघण्टा ७ हजार ५ सय ३० वोन ज्याला थियो । ज्याला निर्धारण मजदुर युनियनका ५ सदस्य, कम्पनी व्यवस्थापन र सरकारी प्रतिनिधिसहित २७ जनाको कमिटीले गर्ने गर्छ ।
ट्याग्स: १४ लाख तलब, Korea money